Dowlada Turkiga ee ergay gaar ah u magacawday wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland. – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Turkiga ee ergay gaar ah u magacawday wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Danjirihii hore ee Dowladda Turkiga u qaabilsanaa dalka Somalia, Ambassador Olgan Bekar ayaa wararku sheegayaan in loo magacaabay Ergayga Khaaska ee Dowladda Turkiga u qaabilsan Wada-hadalsiinta Dowlada Fedraalka Somaaliya iyo Maamulka Somaliland.
Danjiraha hada ee dalka Turkiga u fadhiya Somalia ayaa sheegay Magacaabistaas, isagoo Tilmaamay in Ambassador Olgan Bekar uu kaalin muhiim ah ka qaatay Xoojinta Xirirka ka dhexeeya labada dal ee Somalia iyo Turkiga,hadan uu markale fududayn doono wada hadalada labada dhinac.
Maamulka Somaliland weli kama hadlin Magacaabista masuulkaas ee dowlada Turkiga, Wada-xaajoodkii ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaana in mudo ah kahad ku jiray ayadoo aan la ogayn xiliga kama danbaysta ah ee dib loo bilaabayo.
Maamulka Somaliland waxay dadaal Diplomaasiyadeed ugu jiraan inay Caalamka ka helaan aqoonsi si ay u noqdaan wadan ka madaxbanaan dalka Soomaaliya intiisa kale, mana jirto dowlada wali aqoonsatay Soomaaliland sidoo kale dowlada dhexe ee Soomaaliya ayaa aaminsan inaysan Soomaaliland ka go’I Karin Soomaaliya inteeda kale wixii la kala tabanayana ay tahay in xal laga gaaro.
← Taalibaan oo weerar ku dishay ugu yaraan 23 ka mid ah ciidamada Afghanistan
Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Puntland oo la dhaariyay. →